Ivon-toerana fandraisana ankizy niharan’ny herisetra ara-nofo
Ankizy iray amin’ny dimy no iaran’ny herisetra. Herisetra ara-batana, ara-tsaina ary ara-pananahana no matetika mitranga raha ny eto amin’ny faritra Atsinana. Raha eo amin’ny sehatry ny fanambadiana aloha loatra kosa dia ankizy 81 no noraisina antanana toy ny fanaraha-maso sy fanomezana fiofanana mifanaraka amin’ny tsirairay.
Io no nivohitra tamin’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety izay nataon’ny lehiben’ny sampandraharahan’ny Mponina, ny fihariana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Atoa Mahatody Emile sy Rtoa Manou, mpandridram-paritra ny ady amin’ny fanambadiana aloha loatra ato amin’ny faritra Atsinanana.
Arak’izany ambony io taha io manoloana ireo tranga fanosihosena ny zon’ny ankizy. Notokanana tamin’ny faha 26 septabra 2016 lasa teo ny Centre Vonjy ao amin’ny CHU hopitaly Ben’ny Toamasina izay andraisana ireo ankizy niharan’ny herisetra ara-pananahana. Saika efa ao anatin’ny Centre Vonjy avokoa ireo fikarakarana ho an’izany. Raha ny zava-misy teo aloha tokoa mantsy dia saika toerana maro andalovan’ny Ray amandReny manana ankizy niharan’ny herisetra izay isan’ny mahatonga ny Ray amandReny manatona manam-pahefana tompon’andraikitra; ankehitriny dia efa hita ao avokoa na ny mpitsabo, ny polisy izay mandray antanana ny olona nahavita ny heloka sy fanenjehana izany. Izao no vita dia ny fiarahamiasan’ny minisitry ny Mponina, ny fihariana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy izay tohananan’ny UNICEF. Fantatra ihany koa fa amin’ny maha reny mpihahy ny ankizy an’i Rtoa Vohangy RAJAONARIMAMPIANINA dia tonga nitokana izany niaraka tamin’ny Filohan’ny Repobilika Malagasy ihany koa ny tenany.
Prud'Homme R. : 30-09-2016 - 09:20